केपी ओलीका सपना: सरकारका समृद्धि र विकासका उदेश्यमुखी योजना हुन ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
केपी ओलीका सपना: सरकारका समृद्धि र विकासका उदेश्यमुखी योजना हुन !
२०७६ साउन १९ गते आइतवार
आज हेर्दा हेर्दै नेपाली झण्डा बाहक नेपाली पानीजहाजको कन्टेनर आउने भयो , भोलि पानी जहाज पनि आउँछ । रेल पनि गुडछ । त्यसैले यहाँ पानी जहाज र मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी ओली बारे थोरै चर्चा गर्न मनलाग्यो । केपी ओलीले पानी जहाज चलाउने , रेल गुडाउने भन्ने कुरा यो सरकारको उद्द्यस्यमुखी र बिकासमुखी योजना हो र थियो । यस बिषयलाई केहि मानिसहरुले, केहि प्रतिपक्षहरुले उडाउन सम्म उडाएका छन । कसैले बाल्टिमा पानी राखेर कागजको जहाज बनाएर केपी ओलिको पानी जहाज़ भनेर फोटो खिंची सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गरेर देखाए । हिलोमा पल्टेको बसलाई केपी ओलीको पानीजहाज हेर भन्दै उड़ाए । हिजो हावाबाट बिजुली निकाल्ने क़ुरागर्दा तिनै केपी ओलीलाई हावामा बिजुली निकाल्ने हावा प्रधानमन्त्री पनि भनियो । भन्ने पनि भनियो , नभन्ने पनि भनियो । तर पछि उनीहरुले नै देखे , दृश्य अवलोकन गरे , तिनै केपी ओलीले हावाबाट निकालेको बिजुली उद्धघाटन गरेरै देखाए । बिरोधीहरुको मुखमा बुजो नै लाग्यो । अब अहिले नेपालमा कसरि पानीजहाज चल्छ ? समुद्र नभएको देसमा पनि पानी जहाज चल्छ ??? नहुने कुराहुन भनेर टिका टिप्पणी भएको छ । बहस चलेको छ ।
आज हेराहेरै पानी जहाजको कन्टेनर नेपाली झण्डा फहराउँदै आउने भएको छ । भोलि पानी जहाज़ पनि आउँछ । रेल पनि आउँछ । हिजो खिल्ली उडाउनेहरु अब के भन्ने होलान ?? के लेख्ने होलान ??? बिचरा ! दया लाग्न थालेको छ । आजको यो एक्काइसौं शताब्दी र बिस्व भूमण्डलिकरणको युगमा आइपुग्दा पनि हामिहरु पुरानै युगको परिकल्पना गरेर यथास्थितिबादि बन्ने होइन । बिरोधको लागि बिरोध गर्नेपनी होइन । नयाँ युगमा युग सुहाउँदो युग सापेक्ष परिबर्तनकारी सोच र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । आबस्यकताको पहिचान गर्दै सम्भाबनाको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
नयाँ सोच , नयाँ बिचार ल्याउनु पर्छ । केपी ओलिको नयाँ सोच आएको छ । दूरदर्शी सोच आएको छ । बर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रिले मुलुकलाई समृद्धि बनाउने उद्द्यस्य बोकेको झलक स्पष्ट देखिन्छ । यसो भनी रहंदा कसैलाई केपी ओलीको स्तुतिगान गरेको भन्ने भ्रम पर्ला , त्यस्तो लाग्ला । त्यसो पटक्कै होइन । हरेक ब्यक्ति वा पार्टीमा कमिकमजोरीहरू नहुने होइनन , हुन्छन । मानविय कमिकमजोरी पनि हुन्छन, हुने गरेका पनि छन । ठुला , साना सबैमा हुन्छन र छन । तर यहाँ हरेकको सबलपक्ष र सकारात्मक सोचको प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । तर आखिर पानीजहाज किनेर समुद्रमा चलाऊंछु , बिदेसबाट सस्तोमा सामाग्री आयात गरी आफ्नो देसका जनतालाई उपलब्ध बनाउँछु भन्ने सबलपक्ष हो नी ! तरपनी फेरी यहाँ केपी ओलीलाई उडाउन शुरू भएको छ । किन यस्तो हुँदैछ ?? कसैले राम्रो गर्छु भन्दा उसलाई साथ दिनेकी ? उडाउने ? के अरूले नगरेको नयाँकाम गर्छु भन्ने उद्द्यस्य नै नराम्रो होर ?? के देसको समृद्धि गर्न खोज्नु अपराध होर ?? पटक्कै होइन । यो त चिन्तनको दरिद्रता र अरुका सबलपक्ष र सकारात्मक सोचलाई स्वीकार गर्न , पचाऊन नसक्नु हो । हामीले नजानेको , गर्न नसकेको , नगरेको अरूले जान्यो, गर्न खोज्यो र गर्यो भने स्वागत गर्न सक्ने मानसिकता प्रतिपक्ष लगायत सबैमा हुनुपर्छ । तबमात्र देस बन्छ । बिरोधको पनि सीमा र तरीका हुनुपर्छ ।
अब थोरै पानी जहाजको बारे चर्चा गर्न चाहन्छु ।
राजा महेन्द्रले तत्कालीन राष्ट्रिय पँचायतको सल्लाह र सहमतिमा Royal Nepal Shipping Corporation स्थापना गरेर ब्रिटिस कम्पनिबाट नेपालको लागि पानी जहाज खरीद गरेका थिए । २०२७ सालमा पानीजहाज सम्बन्धी ऐन समेत बनाएका थिए । पछि सरकार र ब्रिटिस कम्पनिको आन्तरिक कुरा नमिलेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको थियों । अर्कोतिर -सन्सारकै सबैभन्दा ठुलो भुपरिबेस्ठित राष्ट्र मंगोलियामा 200 भन्दा बढ़ी पानीजहाज समुद्रमा चलेका छन । नेपाल पनि भुपरिबेस्ठीत मुलुक (Land Locked Country) भएकोले पानी जहाज किन्ने र समुद्रमा चलाउने भन्नेकुरा असम्भाबना पटैक्कै होइन । हाम्रा दुई छिमेकी देसमा एकातिर हिन्द महासागर र अर्कोतिर प्रशान्त महासागर छन । अन्तरराष्ट्रिय कानुनी प्राबधान अनुसार भुपरिबेस्ठित मुलुकलाई समुद्री आवत-जावत गर्ने अधिकारमुखी सुबिधा प्रदत गरिएको हुन्छ । मात्रै दुई छिमेकी देससँग बन्दरगाह उपयोग गर्ने पारबाहन सन्धि/सम्झौता गरे पुग्छ ।
मित्रहरु ! हामी सबै , संधै कोहिपनि पुर्ण छैनौ । हामीले नजानेका , नबुझेका धेरै छन । यस कुरालाई मनन गर्न सके राम्रै हुन्छ । कसैले राम्रो गर्छु भन्यो भने स्वागतयोग्य बिषय मान्नुपर्छ । राजा महेन्द्रले सकेको केपी ओलीले नसक्ने हुन्छ ? पँचायती ब्यबस्थाले हिजो गर्न सकेको आजको बामपन्थि सरकारले नसक्ने कुरा हुन्छ ?? हुँदैन। मंगोलियाले सकेको नेपालले नसक्ने कुरा हुँदैन । तसर्थ राम्रो कुरा र राम्रो काम लाई हावामा नउड़ाऊँ । राम्रो राम्रै भनौं । नराम्रो नराम्रै भनौ । भने अनुसार तोकिएको समयसम्म पनि गरेनन भने, संधैभरी गफमात्रै गरे र काम गरेनन भने सकारात्मक आलोचना र बिरोध पनि गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्ष भनेको सत्तापक्षका राम्रा कामकुरालाई मान्नु ,सहयोग पुर्याउनु र नराम्रा काम गर्न नदिनु , नराम्रा काम गर्नबाट रोक्नु , खबरदारी गर्नु हो । कतिपय अबस्थामा सत्तापक्षलाई सजक र सतर्क बन्न बनाउन बिरोध पनि गर्नुपर्छ । तर यहाँ त सत्तापक्षले राम्रो नराम्रो जे गरेपनी लुंडेमेसो पारेर प्रतिपक्षले बिरोध गरिनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखा परेको छ । यसले राष्ट्रको बिकासमा अबरोध ल्याउँछ । तसर्थ मुलुकको हितमा सबै मिलेर अघि बढ़ौं । सत्तापक्षको सही बाटोलाई सबै पक्षबाट रचनात्मक सहयोग गरौं ।